Open Development Mekong - အဖွဲ့အစည်းများ OD Mekong Datahub
ရေအရင်းအမြစ်များ (124) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (114) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (110) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (105) Sustainable develop... (90) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (78) ဇီဝမျိုးကွဲများ (71) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (67) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (65) စိုက်ပျိုးရေး (54) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (53) မြစ်ချောင်းများ နှင... (52) လူ့အခွင့်အရေး (49) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင... (47) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (46) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (45) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (45) ကုန်သွယ်ရေး (43) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (43) စွမ်းအင် (40) မြေယာ (40) အခြေခံအဆောက်အဦများ (38) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း... (37) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (36) လမ်း၊ တံတားများ (36) အလုပ်သမား (34) အကြီးစား နှင့် အသေး... (34) ရေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ... (32) ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ... (31) ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နှ... (30) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (29) နိုင်ငံခြားသား ရင်း... (29) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (28) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု (28) လူဦးရေ (27) သင့်လျော်အောင် စီစဉ... (25) ကျား၊မ သဘော (25) လူကုန်ကူးခြင်း (25) အလုပ်သမားများ၏ သမရိ... (25) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (24) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (24) SDG 14 Life below w... (24) SDG6Clean water a... (24) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (23) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (23) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (23) ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (22) သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံး... (22) လူထုအခြေပြု ငါးဖမ်း... (21) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာမူ... (21)
PDF (843) WMS (228) HTML (174) CSV (51) XLSX (43) XLS (28) ZIP (28) DB_TABLE (20) URL (15) SHP (13) GeoJSON (10) KML (10) DOC (8) GeoTIFF (6) DOCX (4) geotiff (4) PNG (4) JPEG (3) PPTX (3) XML (3) PPT (2) TXT (2) ESRI Grid (1) JSON (1) mrc (1) raster (1) sqlite (1)
Open Development Me... (1393)
unspecified (691) CC-BY-4.0 (191) License not specified (103) CC-BY-3.0-IGO (83) Creative Commons At... (40) CC-BY-SA-4.0 (20) CC-BY-SA-3.0-IGO (16) Creative Commons At... (15) Creative Commons No... (9) CC-BY-NC-4.0 (6) Other (Attribution) (6) Attribution-NonComm... (3) CC-BY-NC-SA-3.0 (3) CC-BY-ND-4.0 (3) CC-BY-NC-ND-4.0 (2) CC0-1.0 (2) FAL (2) Other (Open) (2) CC-BY-NC (1) Creative Commons CC... (1) ODC-BY-1.0 (1) Open Data Commons A... (1) Open Data Commons O... (1)
ကမ္ဘောဒီးယား (978) ထိုင််း (781) ဗီယက်နမ် (770) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (759) မြန်မာ (689) တရုတ် (314) ဖိလစ်ပိုင် (203) အင်ဒိုနီးရှား (199) မလေးရှား (198) စင်္ကာပူ (188) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (186) တီမော လက်စ်တေ (123) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (117) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (117) အိနိ္ဒယ (109) သီရိလင်္ကာ (107) ဂျပန် (106) မွန်ဂိုးလီးယား (103) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (102) ဟောင်ကောင် (101) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (99) Global (72) မဲခေါင် (20) Asia-Pacific (13) အာရှ (5) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (5) ဘူတန် (5) မေ်ာလ်ဒိဗိ (5) နီပေါ (5) အရှေ့တောင်အာရှ (5) 142 (4) ဩစတေးလျ (4) ကွတ်ကျွန်း (4) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (4) ကီရီဘာတီ (4) မာရှယ်ကျွန်း (4) နယူးဇီလန် (4) ပလော (4) ထွန်းဂ (4) ဆာမိုအာ (4) အာဖဂန်နစ္စတန် (3) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (3) အလယ်အာရှ (3) အရှေ့အာရှ (3) ဂူအန် (3) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (3) ကီဂျစ်စတန် (3) ကာဇက်စ်တန် (3) မကာအို (3) မြောက်မာရီယားနား (3)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (1190) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (14) လာအို (12) ထိုင်း (11) တရုတ် (7) ဗမာဘာသာစကား (6) ခမာဘာသာစကား (4) ပြင်သစ် (2) ဂျပန် (1)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၁)၊ ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက် (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်)
မြန်မာ ဥပဒေ 2014၊ 23 ဇန်နဝါရီ အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ဤဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း၍ ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ...
Global Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) International Work Group for Indigenous Affairs or IWGIA (Edited... 2021 တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ
ကမ္ဘောဒီးယား, Global, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Advocacy and promotional materials Human Rights Watch 2021 လူ့အခွင့်အရေး
Global Advocacy and promotional materials Spalding, Mark D and Leal, Marice (editors) 2021 ကာကွယ် သစ်တောများ, သစ်တောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
Global Guidelines, instruction manuals, handbooks Stephanie Russo Carroll; Maui Hudson; et all. 2018 တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ, တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့်ဆက်ဆိုင်သော မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Darathtey Din, Ryn Jirenuwat, Aung Khant Kyaw, Chan Muyhong, Trang... 2021 စီးပွါးဖြစ် မြေယာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း, ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း နှင့် အာဏာမျှဝေသုံးစွဲခြင်း, မြေယာ, အခြေခံအဆောက်အဦများ, အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
ပွင့်လင်းသတင်းအချက်အလက်များ (Open Data)ရှိမဲခေါင်ဒေသအမျိုးသမီးများ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မဲခေါင်, မြန်မာ, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Mia Chung and Pyrou Chung 2020 ကျား၊မ သဘော
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 23 ဇွန် ရင်းမြစ်: Mekong Infrastructure Tracker... ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ, စွမ်းအင်, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, အခြေခံအဆောက်အဦများ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2015၊ 27 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: Asian Development Bank / Environment Operations Centre (www.gms-eoc.org). ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Pornpana Kuaycharoen, Luntharima Longcharoen, Phurinat Chotiwan,... 2020 စီးပွါးဖြစ် မြေယာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း, စီးပွါးရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး, ပြည်သူပိုင် မြေငှါးရမ်းမှု, လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များ, အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း Case studies Soimart Rungmanee, Souknida Sautouky, Maw Thoe Myar and Patcharin... 2021 ကျား၊မ သဘော, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်သောအမျိုးသမီးများ, မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မြေယာအမျိုးအမည်သတ်မှတ်ခြင်း, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု
This report considers the interlinkages between migration, gender, and land tenure. The study on which the report is based explored how migration affects women’s land tenure...
ကမ္ဘောဒီးယား, တရုတ်, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 15 မေ ရင်းမြစ်: R. Oakleaf, James; M. Kennedy, Christina; Baruch-Mordo, Sharon;... စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း, မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 15 မေ ရင်းမြစ်: ETH Zurich (https://icr.ethz.ch/data/epr/#geoepr) တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ